HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraIhe ụmụ akwụkwọ Hacettepe na-ekwu na Solo Bus Application
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey 0
Ihe ụmụ akwụkwọ na-ekwu na ngwa hacettepeli solo bus
Onye isi obodo Ankara bụ Mansur Yavaş, onye na-ege ntị n'olu ụmụ akwụkwọ ma na-ege ntị n'ihe ha chọrọ, na-aga n'ihu na-eme mkpebi na-atọ ụmụ akwụkwọ ahụ ụtọ.
N’okpuru okwu a “Onye isi ụmụ akwụkwọ nwere mmemme”, Maazị Yava has, onye merela aka ọrụ ndị na-enye aka na ụba ụmụ akwụkwọ n'ọtụtụ ebe site na ụgwọ mmiri ruo na njem, na-emezu nkwa ya otu otu.
Onye isi ala Yavaş, onye butere ego 50 na ego mmiri maka ụmụ akwụkwọ, bịanyere aka na nso nso a mkpebi na-emetụta ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na Beytepe Campus nke Mahadum Hacettepe.
IWU SOLO BOSES malitere ọrụ
N'elu iwu nke Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş, EGO General Directorate malitere inye ọrụ 20 solo bọl n'efu na mahadum Beytepe Campus, ebe ihe karịrị otu puku ụmụ akwụkwọ 5 na-akwaga na nkezi kwa ụbọchị.
21 solo bus na mpụga bọs 5 bellows ga-eburu ụmụ akwụkwọ n'efu n'efu na mpụga nke Çayyolu Metro n'etiti awa 7-06.30 na ụbọchị 20.00 nke izu ahụ.
Studentsmụ akwụkwọ jiri ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ n’ụbọchị mbụ nke ngwa ahụ gosipụtara afọ ojuju ha wee kelee Mayor Yavaş site n’okwu ndị a:
-Irem Aslan (21 afọ): oldu Ọ bụ ezigbo mkpebi. N'ihi na iwu nke ụgbọ ala mgbanaka ahụ na-abawanye kwa ụbọchị ma ichere akara ahụ ghọrọ anyị ahụhụ. Ọ ga-amasị anyị ịkele Onye isi ala anyị Mansur Yavaş maka ịnụ olu anyị ma nye anyị ụgbọ njem a anaghị akwụ ụgwọ. "
-Adem Üngör (afọ 24): oldu Ọ dị ezigbo mma ịnwe ụdị ngwa n'etiti awa 6.30-20.00 n'ihi na ọ bụ oge awa gafere. Ana m ekele Onye isi ala anyị
-Adandan Yüksel (afọ 21): “Echere m na ọ bara uru nke ukwuu. O siiri m ike ichere ebe a mgbe m na-aga ụlọ akwụkwọ. Ana m ekele gị nke ukwuu maka ọrụ n'efu. ”
-Esra Şahin (afọ 20): ım Onye isi obodo anyị gosipụtara na ọ na-eche banyere ụmụ akwụkwọ ahụ kemgbe ụbọchị mbụ ọ malitere ọrụ. Ọ dị mma ịnwe bọs ndị a n’oge awa kacha elu. Ọ ga-amasị anyị ịkele Onye isi ala anyị Mansur. ”
- Sinan Uyar (afọ 19): “Mansur Yavaş bụ onye isi ala anyị hụrụ n'anya. Na-arụ ọrụ maka ụmụ akwụkwọ. Ọ na-akwado akụ na ụba anyị. O kwenyekwara okwu banyere kaadị kaadị 60 maka 200 TL. Ana m ekele gị nke ukwuu. ”
-Melih Toy (19 afọ): uz Anyị na-agbaso ọrụ Mansur Yavaş maka ụmụ akwụkwọ. Sogbọ ala ndị njem na-akwụghị ụgwọ belatala n'ahịrị bọs na ichere, na-enwere onwe ha. Anyị na-ekele gị maka nkwado gị. ”
-Itrikọ Muslim (20 afọ): “masịrị m ya nke ukwuu. Ngwa ngwa bọs a na-akwụghị ụgwọ dị mma maka ụmụ akwụkwọ, maka na ego ụmụ akwụkwọ enwebeghị ike. Anyị na-ekele Mansur Yavaş nke ukwuu. ”
60 TL na 200 ịbanye ngwa kaadị ndenye aha ụmụ akwụkwọ, nke bụ ozi ọma Onye isi ala Yavaş nyere, ga-amalite na Ọktọba.
Nkwupute Egwu: Ngwá Ọrụ Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ na Bellows na Solo Type 06 / 06 / 2013 Bellows na solo Type Gas chụọ n'ọrụ ụgbọ ala Alınacaktır Konya mepere Municipality 100 ibu (40 bụla bellows ụdị na 60 ibu solo Type) Gas chụọ n'ọrụ ụgbọ ala nnara 4734 Mba ga-ọdịda site na-emeghe usoro site 19 nke Nkeji edemede ọha ị nweta iwu. Ihe ọmụma zuru ezu banyere obi na-depụtara n'okpuru: Obi Registration Number: 2013 / 63053 1-Administration a) okwu: Merkez Mah. Vatan Cd. Nke 2 Selçuklu / Konya b) Telephone na fax nọmba: 3323551731 - 3323553745 c) E-Mail Address: satinalma@konya.bel.t bụ atọ) obi akwụkwọ nwere ike hụrụ Internet adreesị (ọ bụrụ na ọdabara): https://ekap.kik.gov. En / EKAP / 2-Isi nke obi ebere
33. Istanbul Film Festival kwuru Renault Motor 07 / 04 / 2014 Istanbul Film Festival kwuru Renault engine Renault, ka anya e nyere ka ụwa na-eduga film ememme irregularity support, haziri ahazi nke Istanbul Foundation maka Culture na Arts, na ga-anọgide ruo mgbe April 20 33. Ọ na-egosikwa na Ememe Istanbul Film Festival. 100 Cinema Turkish. Na-eme ememme gị, 33. Renault Istanbul Film Festival mmeghe gala, "Film mmefu" ama aha hụrụ uru nke ha ụgbọala Festival Asọpụrụ Awards red kapet ugbo ala. N'oge ememe ahụ, Renault ga-ekenye yabancı Ịga na ihe nkiri ize ndụ na ndị mba ọzọ ama aha a kpọrọ obodo anyị. Fim ndị na-eme ihe nkiri na-eso Renault na Facebook ga-enwe ike imeri tiketi na fim ndị a na-atụ anya nke ememe. Renault bụ Renault ma dị ike
Ndị njem na-eme mkpesa ma IETT na-ekwu na ndị na-ahụ maka ikuku ụgbọ mmiri zuru ezu 03 / 04 / 2013 Ndị njem na-eme mkpesa, ma IETT metrobüs ndị na-ahụ maka ikuku oyi na-ekwukarị Kwa ụbọchị, ọtụtụ narị puku mmadụ na-eji eriri metrobus enye nnukwu ọrụ. Otú ọ dị, n'ihi oke njupụta, 'ísì' nke a na-akpụ n'ime ụgbọ ala na-akpata mkpesa nke ndị njem ahụ. Ndị ọrụ IETT lim Anyị nọ na-arụ ọrụ. Ihe na-esi ísì dị njọ. Yol Ndị njem na-atụ anya na a ga-edozi nsogbu ahụ n'oge na-adịghị anya. N'ebe a na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè, nke kachasị amasị ndị njem ụgbọ okporo ígwè dị na Istanbul, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikuku iku ume n'oge awa ọrụ n'ihi oke ike. Eziokwu ahụ bụ na ndị ikuku na-adịghị arụ ọrụ n'ụgbọala ndị ọzọ na isi ísì nke si n'akụkụ ikuku nke nnukwu ụgbọala ndị ahụ bụ maka ndị na-eme njem na metrobus larda
Kedu ihe ndị njem na ndị ọrụ ahụike na-agwa anyị? 17 / 04 / 2013 Kedu ihe ndị njem na ndị ọrụ ahụike na-agwa anyị? Ụnyaahụ ndị njem na-eme njem na-aga agha; taa, site n'aka onye dọkịta na ndị na-elekọta ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ahụ ike na ụbọchị ụbọchi ahụ! Tie ụgbọ okporo ígwè Turk-dabere Railway Ọrụ Union na Officer Sen Transport-Officer nke Ị na-ebe, na-alụ nke nlekọta ahụ ike ọkachamara Turk-dabere Health-Business na Officer Sen-dabere Health Sen Syndicate N'ezie, nke a abughi ebe ndi oru nke ndi oru ahia, "Gini bu ebe ahu" na-ekeputa onodu a. Maka na ndị isi nke ndị ọrụ ahia a kwesịrị, nkwado otu, iru eru maka ndị ọrụ ha. Ma enwere ike ikwu na ndị ọrụ na-arụ ọrụ na alaka ndị a enweghị ike ịgbanyere oge na-enweghị ọkọlọtọ megide ọchịchị ndị a. N'ihi gọọmentị chọrọ
İSPARK Okporo ụzọ, ebe ụgbọala, ụzọ 21 / 10 / 2013 İSPARK Okporo ụzọ, ogige ma gaa n'okporo ụzọ na-ekwu, sị: Ebe ụgbọ njem ọha na eze ISPARK dị nso na ebe ndị na-adọba ụgbọala arụnyere. Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ iji mepụta ebe ọhụrụ n'ihi mmasị siri ike. İSPARK mepere usoro 'Park Et, Devam Etı', nke ndị ọkwọ ụgbọala si n'ụgbọ ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ ala, steamship na Marmaray bugoro n'ụgbọala na-achọ ịnọgide na ụgbọala ndị a, na-eme ka ọ dị elu n'ihi oke mmasị. ISPARK ejirila 34 na-agba bọmbụ ụgbọala na 10 ụgbọala ma zọpụta okporo ụzọ Istanbul site na 100 ụgbọ ala convoy. Ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị na-enweghị ike ịbanye n'ihi na ha enweghị ohere maka ụgbọ ala ha ma ọ dị mkpa ka ha rute Metrobus stop kadar
Nkwupute Egwu: Ngwá Ọrụ Ngwá Ngwá Ngwá Ngwá Ọrụ na Bellows na Solo Type
33. Istanbul Film Festival kwuru Renault Motor
Ndị njem na-eme mkpesa ma IETT na-ekwu na ndị na-ahụ maka ikuku ụgbọ mmiri zuru ezu
Kedu ihe ndị njem na ndị ọrụ ahụike na-agwa anyị?
İSPARK 3 kwuru na TL ga-aga n'ihu na-adọba ụgbọala
Kocaelispor kwadoro na-ekwu na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ enweghị obere tram
Ihe ndị mmadụ na-agwa Süleyman Karaman maka Parliamentlọ Omeiwu (Video)
BTS kwuru na ihe ọghọm na-aga n'ihu na-egbu ọchụ